Cristiano Ronaldo oo fariin u diray Rio Ferdinand kaddib goolkii guusha uu ka dhaliyay Villarreal iyo difaacii hore ee Man United oo daaha ka rogay qoraalkii fariintaas – Gool FM
(Manchester) 30 Sebt 2021. Weeraryahanka huwan awoodda gool-dhalineed ee Cristiano Ronaldo ayaa xalay daqiiqaddii ugu dambeysay daqiiqadihii lagu daray ciyaarta goolka guusha u saxiixay naadigiisa Manchester United ciyaartii Champions League ay la qaateen Villarreal.
Kaddib dhammaadkii ciyaarta, Ronaldo ayaa farriin u diray saaxiibkiis Rio Ferdinand oo ay horraan kasoo wada ciyaareen Old Trafford, waxaana difaacii hore ee Man United uu soo bandhigay fariintii kaga timid Kabtanka xulka aranka Portugal.
“Ma aanan u ciyaari si fiican, balse waan ogaa inaan dhalin doono” ayay u dhignayd fariintii Ronaldo uu usoo diray saaxiibkiisa sida uu Ferdinand xaqiijiyay.
Kooxda Villarreal ayaa kubbad cajiib ah kusoo bandhigtay Masraxa Riyada iyadoo goolka la hor martay kaddib markii uu shabaqa gaaray Paco Alcacer daqiiqaddii 53-aad, waxaana barbarreeyay Alex Telles daqiiqaddii 60-aad ee ciyaarta kahor inta uusan Cristiano Ronaldo dhalin goolkii guusha ee dhammeystiray soo-laabashada daqiiqaddii 95-aad ee ciyaarta iyadoo sidaas Manchester United ay guul 2-1 kaga heshay dhiggeeda.
Cristiano Ronaldo hooyadii oo kasoo horjeedda guurka wiilkeeda iyo Georgina Rodriguez... (Maxay tahay sababta?)